2019 May | RUUG-CADDAA
SOOMAALIGII DALKA KHIYAAMOW WAA DIL!
Posted by Ruugcadaa on May 23rd, 2019
Khaayin wadan waa qofka madaxbanaanida, sirta, iyo dhammaan danaha dalkiisa cadaw u gacan geliya. Maanta Soomaalia iyo Kenya cadaawad baa dhextaal. Marka qofkii Kenya u xagliya, la shira, u garaaba, sirta Soomaaliyeed u gudbiya, ama niyadda kala jira waa cadaw Soomaaliyeed. MAANTA WAXAY MARAYSAA XINIINYO TAABSHO.
Posted in Warar Comments Off on SOOMAALIGII DALKA KHIYAAMOW WAA DIL!
Posted by Ruugcadaa on May 14th, 2019
dawlada Maraykanka markii ugu horraysay ee lagu dhisay Dastuurka waxaa loo arkayay in lagu maamulayo nidaam federaali ah. erey uu ka soo jeeda Federaalka, ayaa ah fikradda ah in madax-bannaanida dowladeed loo kala qaybiyo maamul-goboleedka dhexe, iyo qayb kale oo siyaasadeed, sida dawlad-goboleedyada, Tani waa sida dawladda Maraykanka oo leh dowlad qaran, iyo dawladda gobolka.
Posted in Warar Comments Off on Noocyada Federalismka.
Posted by Iftiinshe on May 12th, 2019
Posted in Warar Comments Off on Wax badan ka Ogow Sababta dowlada Hindiya ay u dooneyso inay xirto Daaciga Zaki Naik.
Maxaan u Ogolaaday in Maraykanku La Noqdo Jinsiyadooda
Posted by Iftiinshe on May 10th, 2019
Arinka iga soo maray dowladda Maraykanku maaha mid lagu soo Koobi karo qoraalkan, waayo waa Arrin soo jiitamayay 16 sano iyo 8 bilood, sagaal sano oo ka midana aan ku jiray liiska Xayiraadda Duulimaadka.Cinwaanka maqaalkan ayaan ka qaatay talo uu i siiyay barafosoor aanu saaxiib nahay oo igula taliyay inaan u bixiyo buug aan ka […]
Posted in Warar Comments Off on Maxaan u Ogolaaday in Maraykanku La Noqdo Jinsiyadooda
Wasaarad warfaafineed Soomaaliya ma u baahantahay?.
Posted by Halgame on May 9th, 2019
Waxaa jira dalal badan oo aan lahayn wasaarad lagu magacaabo wasaaradda warfaafinta, oo aan ugu jirin liiska wasiirada la magacaabo, dalalka reer Galbeedka badankoodu ma laha wasaarad warfaafineed, haddaanay dhammaantoodba lahayn, dalalka Carbeed Qatar ayaan lahayn wasaaradda warfaafinta oo iyaguna 2000 ka saaray liiska wasaaradaha loo magacaabo wasiir.
Posted in Warar Comments Off on Wasaarad warfaafineed Soomaaliya ma u baahantahay?.
Cabsi ka dhalatay nin cunsuri caddaan ah oo u sahan tagay masaajid Soomaali leedahay
Posted by Ruugcadaa on May 9th, 2019
Waxaa ku sii xoogysanaya wadamada Galbeedka kooxaha Islaam nacaybka ah,halka ay hore u dhaceen weeraro gudaha loogu galay dad ku cibaadaysnaya Masaajiddo,halka Masaajiddo badan la qabadsiiyay dab.
Posted in Warar Comments Off on Cabsi ka dhalatay nin cunsuri caddaan ah oo u sahan tagay masaajid Soomaali leedahay
Boqornimo Waxaa Xiga Labadan Shuruudood
Posted by Ruugcadaa on May 5th, 2019
Gasiirad ku taalay badweyn ayaa waxa sharci u ahaa in qofkii isu soo sharaxa boqornnimadeeda ay horyaalaan laba qodob ama laba shardi. 1.Muddada xukunku waa 4 sano oo aan la kordhin karin. 2.Afarta sano markay dhammaadaan Boqorka waxaa loo masaafurinayaa Gasiirad kale oo aan cidi ku noolayn, ayna ku dhex nool yihiin bahalo dadka cuna.
Posted in Warar Comments Off on Boqornimo Waxaa Xiga Labadan Shuruudood
Dhaliisha Deni iyo Dhoola cadeynta Farmaajo iyo Khayre maxaa ka dhalanka kara?.
Posted by Halgame on May 4th, 2019
Waxaa la odhan doonaa shirkii Garoowe ka hor iyo ka dib , wuxuuna u muuqdaa shirkan hadda ka furmaya Garoowe mid qiyaas u noqon doona siyaasada Soomaaliya haatan ka taagan lagana dheegan karo halka hayaanku ku abbaaran yahay iyo Yoolka la hiigsan doono.
Posted in Warar Comments Off on Dhaliisha Deni iyo Dhoola cadeynta Farmaajo iyo Khayre maxaa ka dhalanka kara?.